Ity no elanelana isan'andro azo andehanan'ny soavaly. Manao ahoana ny fihazakazahan'izy ireo? | Soavaly Noti
Taloha, ny soavaly no fitaovana lehibe indrindra tokony hahafahan'ny olona mivezivezy lavitra. Izy ireo dia toy ny fiara ananantsika ankehitriny, miaraka amin'ny fahasamihafana fa biby izy ireo. Ny zavatra mahaliana indrindra amin'ny rehetra dia ny nanerena azy ireo hanao dia lavitra amin'ny faran'ny andro. Tamin'ny voalohany dia tsy nisy na inona na inona nitranga, satria vonona ho amin'izany izy ireo. Fa ny tena fanontaniana dia Hatraiza no azon'izy ireo an-tongotra, amin'ny faran'ny andro?
Miharihary fa raha niomana ho amin'izany ny biby dia afaka nandeha be ihany koa. Aza mieritreritra anefa fa fiara io. Tsy misy na inona na inona lavitra ny fahamarinana, satria ny isan'ny kilometatra misy dia miankina (sy miankina) amin'ny làlana, ny taonan'ny soavaly, ny karazany ary ny toetry ny fahasalamany. Ny anton-javatra fampandehanana izay mety misy ifandraisany betsaka amin'ireo kilometatra namboarina.
1 Firy kilometatra no azon'izy ireo atao isan'andro?
2 Ohatrinona ny soavaly soavaly?
Firy kilometatra no azon'izy ireo atao isan'andro?
Afaka mihazakazaka anelanelany ny soavaly 30 sy 45 kilometatra isan'andro. Raha sendra mitondra zavatra ianao, dia ahena ho 30 kilometatra ao anatin'ny 24 ora izany halavirana izany. Toa fetra lehibe tokoa izany, saingy tsia. Raha ny marina, talohan'ny nisy aza ny serivisy niorina tamin'ny soavaly. Ohatra, raha te hitatitra olona ianao dia mila mandamina dia lavitra mety haharitra herinandro.
ankehitriny ny soavaly zara raha ampiasaina hivezivezena lavitra. Vitsy dia vitsy ny tranga, eny. Raha sanatria mila mandeha kilometatra an-jatony ianao dia tsara kokoa ny mifidy karazana fiara. Tsotra kokoa, haingana kokoa ary mora vidy kokoa.
Ohatrinona ny soavaly soavaly?
Hitanay ny halehiben'ny dian'izy ireo antoandro, fa, Inona no sisa tavela aminao maniry ny hahafantatra hoe inona ny hafainganam-pandeha farany vitany? Aza matahotra, fa holazainay aminao ihany koa izany.
Ny hafainganam-pandeha farany ambony dia miankina amin'ny vatan'ny soavaly ary koa ny toetran'ny tany, hatramin'ny hatramin'ny English Thoroughbred, izay karazana soavaly haingam-pandeha indrindra, dia hanana olana goavana amin'ny tany be vato. Fa ny fiheverana azy ho salama ary ny tany dia fisaka, afaka mivezivezy amin'ny hafainganam-pandeha maherin'ny 70 kilometatra isan'ora, izay hitovy amin'ny fakana ny fiara miaraka amina fitaovam-piadiana fahefatra (na ny fahadimy, miankina amin'ny motera sy ny lalana).
Fa ankoatry ny English Thoroughbred dia tsy maintsy lazaina fa misy karazana hafa manaitra ihany koa. Araka izany, na dia afaka mandeha lavitra aza ny soavaly arabo, American Quarters dia miavaka amin'ny hazakazaka fohy.
Mahaliana, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Hatraiza ny dia azon'ny soavaly mandeha?
Salama hariva, novakiako fotsiny ny hevitra teo aloha. Mila milaza aho fa tsy mifanaraka amin'ny valiny maro atolotra. Andao atomboka… ny soavaly mihinana 5 kg isan'andro? izany ... ilaina ny manisy fiheverana raha toa ka mijanona '.. raha miasa isan'andro? .. raha malalaka ny ahitra mandritra ny tontolo andro, raha lohataona na ririnina ny ahitra. Tsy afaka manome soavaly 5kg isan'andro ny soavaly ... raha tsy toeram-piompiana. Ary ny momba ny dia lavitra dia tsy lafo izy io, mora vidy kokoa noho ny mampiasa fiara. Angamba ilay Camino de Santiago 700 km eo ho eo, manao fiara amin'ny alàlan'ny fiara ve ny mpivahiny? .. Tsy azon'izy ireo atao anaty soavaly ve izany? Moa ve mora kokoa ny lasantsy noho ny eritreritro? .. Ny soavaly dia mihinana isaky ny km. mandehandeha? .. toy ny fiara? ..
Guillermo Angeles Maya dia hoy izy:
Hatramin'ny fahazazako dia nanontany tena aho hoe ohatrinona ny soavaly mitazona, misintona stagecoach na manana mpitaingina eo amboniny, na eo am-pofoana na amin'ny fampisehoana isan'andro. Eny, ny zava-drehetra dia lesoka amin'ny sinema sy ny famakiana ny fampielezan-kevitr'i Francisco Villa, miaraka amin'ny fitiavana sy fiderana an'ireo biby nahatonga ny tantaran'ny zanak'olombelona azo tanterahina. Misaotra anao
Mamaly an'i guillermo angeles maya
Salama maraina, inona no torohevitrao mba tsy hampiakan-tsoavaly mandritra ny dia lavitra? Ahoana sy firy ny fitsaharana sy sakafo omena?
Raha raisina ireo angona ireo, ao amin'ny sarimihetsika Gladiator, ny fotoana nandosiran'i Máximo avy tany Vindobona (Viena) nankany Trujillo dia tokony ho teo anelanelan'ny 77 ka hatramin'ny 90 andro.
Ahoana ny fomba fanesorana ny kongona amin'ny soavaly